Raadi My ayaa u furan dhinacyada saddexaad kahor intaan la bilaabin 'AirTags' | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah faahfaahinta loo baahan yahay si loo awoodo in la isticmaalo Apple AirTags loo maleynayo waa taas Codsiga Raadinta My waxaa loo furay dhinacyada saddexaad. Hagaag, waxay umuuqataa in CES sanadkaan aad fiirinaysid qaar kamid ah wararka sida xaalku yahay iyo kadib markii Belkin uu shaaciyay inuu adeegsan doono "Raadinta" dhagaha dhagaha ee SoundForm Pro, albaabada ayaa loo furayaa AirTags.
Waana iyada oo aan la furin codsigan Apple ee asalka u ah dhinacyada saddexaad ay adag tahay in la maareeyo raadinta loo maleynayo AirTags. Taasi waa sababta markii warka kuwan sameecadaha sameeya ee Belkin ee lagu soo bandhigi doono wadan ahaan barnaamijka si la mid ah sida qalabkeena Apple u sameeyaan, imaatinka hore ee AirTags ayaa laga fikiray.
Tan, shaqadan ayaa si rasmi ah loo furay. gudahood ka hel Barnaamijka Helitaanka Qalabka in kuwii Cupertino la bilaabay Juunyo 2020 ee la soo dhaafay si loo caddeeyo alaabada dhinac saddexaad ee abka baaritaanka badeecada. Marka waxaan wajaheynaa hal talaabo oo dheeri ah oo ah dhamaadka wararka xanta ah iyo imaatinka rasmiga ah ee AirTags ama waxkastoo ay rabaan inay ugu yeeraan Apple.
Muuqaalkaani wali wuu ku xadidan yahay dadka isticmaala. alaabada Apple iyo shahaadooyinka gaarka ah maaddaama ay tahay goob-bixiye dhammaadka ... Laakiin xaaladdan markay timaaddo qalab cusub oo wata shahaadadan ayaa albaabka si toos ah uga furaysa Apple AirTags, waan arki doonnaa goorta ay yimaadaan iyo haddii qalabyada aan aragnay maalmo ka hor. by Nomad waxay ku socdeen wadada saxda ah ee ku jirta sheyga Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Raadi My ayaa u furaya dhinacyada saddexaad kahor 'AirTags'